Joodariga lagu duubay
Furan gogosha guga ee Bonnell
Furaashka guga guga ee jeebka
Saldhigga Saldhigga Hotel
Xusuusta xumbo xumbo
Kaatalogga Soo Deji
Iyadoo khibrad 30 sano ah u leh wax soo saarka guga
80000 mitir labajibbaaran
80,000 oo mitir oo laba jibbaaran oo warshadeed ah
1600 mitir labajibbaaran
1600 mitir oo laba jibbaaran oo ah hoolka bandhigga joodariga Shiinaha
In ka badan 700 oo shaqaale ah
Wax soo saarka bishii in ka badan 30,000 oo joodariyaal ah
100 milyan dollar
Qiimaha wax soo saarka ee shirkadu waxa uu ka badan yahay 100 milyan oo doolar
QAYBTA WAX soo saarka
Rayson waxa uu soo saari karaa joodariga guga ee huteelka, joodariga sariirta lafaha, joodariga guga jeebka, joodariga guga ee bonnell, joodariga guga ee joogtada ah, joodariga xumbo xusuusta, joodariga cinjirka ah ee hab fidsan oo vacuum ah ama hab duuban. Waxaan haynaa in ka badan 100 nooc oo jira oo ikhtiyaari ah.
ODM& OEM ADEEGGA
01 - Customer samatabbixin fikradda ah alaabta iyo shuruudaha
02 - Qiimeynta iyo design
03 - qiimaynta suuqa
04 - Ku xaqiiji xalka macmiilka
05 - Qiimaha
06 - Tusaale
07 - Dalabka tijaabada/hababka tirada
08 - Warcelinta suuqa
09 - Hagaajinta qaabka alaabta
10 - Diyaarso wax soo saarka
11 - shixnadda
Haddii aad la tashato alaabtayada, waxaad heli doontaa qiimo dhimis lama filaan ah, fadlan isla markiiba nala soo xidhiidh.
In ka badan 90% alaabtayada furaashyada waxaa loo dhoofiyaa Yurub, Ameerika, Australia iyo meelo kale oo adduunka ah. Waxaanu siinaa qaybaha joodariga Serta, Sealy, Kingkoil, Slumberland iyo noocyada kale ee joodariga caalamiga ah ee caanka ah.
9inch Sweet Classic Spring Furaash
10Inj Plush Xusuusta Xumbada joodariga Isku-dhafka ah ee guga
Jeel sariiraha qolka jiifka xusuusta xumbo jeebka joodariga guga
Barkin Raqiis ah oo Raqiis ah oo Kor Loogu Duubay Kartoon
Furashka jiifka ee ardayda ama shaqaalaha
Barkin adag oo dhexdhexaad ah oo sare ee joodariga guga bonnelll
Xumbabada xusuusta cabbirka boqoradda waxay ku duubtaa joodariga sanduuqa 8 inch
Caddaan 8 Inji Hudheelka Size ee Boqorada iyo Furashka Sariiraha Guriga
RAYSON KU SAABSAN
Foshan Rayson Non Woven Co., Ltd. waa shirkad wadaag ah oo Sino-US ah, oo la aasaasay 2007 taas oo ku taal magaalada Shishan, Foshan High-Tech Zone, waxayna ku taal meel u dhow shirkadaha caanka ah sida Volkswagen, Honda Auto iyo Chimei Innolux. Warshada ayaa qiyaastii 40 daqiiqo baabuur ka raacaysa garoonka caalamiga ah ee Guangzhou Baiyun iyo Hoolka Bandhiga Carwada Canton.
Xafiiskayaga madaxa "JINGXIN" wuxuu bilaabay inuu sameeyo siliga guga ee wax soo saarka joodariga gudaha 1989, ilaa hadda, Rayson ma aha oo kaliya warshadda joodariga Shiinaha (30000pcs / bishii), laakiin sidoo kale mid ka mid ah joodariga ugu weyn (60,000pcs / bishii). ) iyo warshado aan tol lahayn oo PP ah (1800tons/bishii) ee Shiinaha oo leh in ka badan 700 oo shaqaale ah.
In ka badan 90% alaabtayada waxa loo dhoofiyaa Yurub, Ameerika, Australia iyo qaybaha kale ee aduunka. Waxaanu siinaa qaybaha joodariga Serta, Sealy, Kingkoil, Slumberland iyo noocyada kale ee joodariga caalamiga ah ee caanka ah. Rayson waxa uu soo saari karaa joodariga guga ee huteelka, joodariga guga jeebka, joodariga guga bonnell, joodariga guga ee joogtada ah, joodariga xumbo xusuusta, joodariga isku-dhafka ah ee xumbo xusuusta iyo joodariga cinjirka iwm.
DHEERAAD AH OO KU SAABSAN US
KU SAABSAN (5)
KU SAABSAN (1)
KU SAABSAN (2)
KU SAABSAN (3)
KU SAABSAN (4)
Shirkadda joodariga ee Rayson China ayaa si firfircoon uga hawlgashay dhammaan noocyada hawlaha bulshada, waxaad ka heli kartaa wararkayaga ugu casrisan halkan!
COC- Shahaadada waafaqsanaanta Alaabta Furaash
Rayson waxa uu siin karaa shahaado u hogaansanaansho COC macaamiisha ku sugan Ameerikada Dhexe, Koonfurta Ameerika iyo Afrika.
2021 Qaababka Furaashka Cusub
Shirkadda Rayson Furaash waxay soo bandhigtay ilaa 20 nooc oo furaash ah sanadkan, dhagsii warkayaga si aad wax badan uga barato!
Koorsada Tababarka Furaashka ayaa si joogto ah loogu qabtaa Halkan Rayson
Rayson wuxuu caawin doonaa koorsada tababarka wakiilada iibka si xilliyo ah si loo siiyo adeeg macmiil oo aad uga wanaagsan macaamiisha.
Sidee Loo Kordhiyaa Cimrigaaga Furaashkaaga?
Sidee loo kordhiyaa cimriga joodarigaaga? Hagaha dayactirka joodariga.
Waxaan u heellannahay hagaajinta tayada hurdadaada waxaana jeclaan lahayn inaan noqdo la-taliyahaaga hurdada, annagoo siinaya macaamiisha joodariyaal wanaagsan, waxaan rajeyneynaa in qof walba uu heli karo nolol wanaagsan!
WHATSAPP: + 86-13536639410 / Iimayl:info@raysonchina.com / Qofka lala xidhiidhayo: Wendy Rong